'Ukukhuluma ngezinkomfa namasemina ngeke kumsize ngalutho uMengameli' | News24
LAST UPDATED: 2018-11-21, 16:30
'Ukukhuluma ngezinkomfa namasemina ngeke kumsize ngalutho uMengameli'
eThekwini - Umholi weqembu eliphikisayo uMmusi Maimane uthi ibimnandi impela inkulumo kaMengameli Cyril Ramaphosa futhi bayamukele ngezandla ezifudumele.
UMaimane uthi bekukuhle kakhulu ukubona ubumbano ePhalamende ngemuva kwesikhathi eside.
"Kungithokozise kakhulu ukubona lowo owayengumengameli uThabo Mbeke naye ekhona lapha ePhalamende ukuzolalela inkulumo kaMengameli uCyril Ramaphosa. Kungikhumbuze inkulumo yakhe yobumbano ethi sonke singama-Afrikana," kusho yena.
UMaimane uthi uRamaphosa uthembise abantu bakuleli isikhathi esisha. Uthi futhi uyazinikela yena kanye neqembu lakhe ukubambisaneni naye.
"Njengoba siphila ngaphansi kombuso wentando yabantu, siphila ngesikhathi lapho kumele sikwazi ukubambisana, umbuso wentando yabantu akuyona impi, asizona izitha, kodwa wukubonisana, lapho singaboni ngasolinye kumele sitshelane ukuze sikwazi ukubambisana," kuqhubeka yena.
Uqhubeke wathi uMengameli uRamaphosa ubhekene nomsebenzi omkhulu futhi uzodinga usizo lwawo wonke umuntu ukuze kuqinisekiswe ukuthi lesi siqalo esisha siyabasebenzela bonke abantu.
"URamaphosa uthole ifa lezemfundo engahlelekile, uthole ifa lomnotho ongahlelekile, konke lokhu kuzodinga ukuba sisebenze ngokubambisana ukuze sivuselele leli lizwe."
OLUNYE UDABA:Isiqalile inkulumo mpikiswano ye-SONA ePhalamende
Uthi yize ibizwakala kamnandi inkulumo kaMengameli ekhuluma ngezinhlelo zabo zokuvuselela izwe, luselude ukhalo.
"Yebo, ukhulume ngokuhlelwe kwezinkomfa, amasemina kanye neminye imihlangano eminingi enizoba nayo ukuhlelela inqubekelaphambili. Lokho ngikubona kuyimizamo yokuqhuba isikhathi kodwa usuke ungakenzi lutho olutheni," kusho uMaimane.
"Konke lokhu ngeke kumsize ukulungisa isimo saleli lizwe, kodwa kusidinga ukuba sisebenze sonke ngokubambisana.
"Kumele siqale ngezemfundo, kumele sivume ukuthi isimo sethu sezemfundo sisenkingeni enkulu. Iningi labafundi abakwazi ukufunda, uma bencintisana nabakwamanye amazwe, abakwazi nhlobo ukufunda," esho.
Uthe abafundi abasezikoleni zasemaphandleni kabakwazi ukuncintisana nabafuthi basezikoleni sabadla izambane likapondo.
"Kumele sizinikele ekulungiseleleni izingane zethu ukuba zibe nekusasa eliqhakazile, ukuze sikwazi ukubhekana nakho konke lonke, kumele silwe nogombelakwesaboe abayingxenye ye-Sadtu.
"Ithimba likaNgqongqoshe wezeMfundo yamaBanga aPhansi elihlola umsebenzi labika ukuthi iminyango yezemfundo ezifundazweni ezingu-6 kwezingu-9 zilawulwa ngabaphathi bakwa-Sadtu abazenzela umathanda," esho.
Uthe ngakho-ke umsebenzi kamengameli wukulwa nalabo gombelakwesabo beSadtu.
UMaimane uqhubeke wathi bayasamukela isiphakamiso sikaMengameli sokwandisa amathuba okuqeqeshelwa umsebenzi ngoba kubaluleke kakhulu ukuthi abantu abasha bathole ulwazi lomsebenzi.
Lokhu kuqala ngokuthi uhulumeni abhekane nenkinga yala bantu abanika izihlobo nabangani imisebenzi, esikhundleni sokunika labo abafanele.
Goodwood 16:22 PM
Bellville 16:18 PM